बलान नदीमा तटबन्ध निर्माणले दर्जन बढीबस्ती सुरक्षित - inaruwaonline.com
बलान नदीमा तटबन्ध निर्माणले दर्जन बढीबस्ती सुरक्षित
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ३०, २०७३ समय: १४:३८:४२
राजविराज, ३० भदौ । सप्तरी जिल्लाको बलान नढीको पूर्व भागमा तटबन्ध निर्माणले बाढीको उच्च जोखिम रहेको एक दर्जन बढी गाउँ सुरक्षित भएका छन ।
बलान नदिमा सप्तरी जिल्लाको हर्दिया, कुशहा, मल्हनिया, मौआहा, बेलही, पटेर्वा गाविसका गरी कुल ४ किलो ४५० मीटर तटबन्ध निर्माणले ती गाविसका दर्जन गाउँबस्ती सुरक्षित भएका हुन । गाउँवस्तीसँगै हजारौ विघा खेती योग्य जग्गा कटान हुनबाट जोगिएका छन । मौआहा गाविसमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको घर छन ।
दुई दशक अगाडी बलान खोलामा आएको बाढीले सप्तरीको बेल्ही गाविस–१ का करिब ८० घर सोही वार्डमा खोला भन्दा टाढामा सरेका छन । तरपनि बाढीको उच्च जोखिम नै थियो । बेल्हीको वार्ड नं. १ सहित सिङ्गो गाविस नै बलान खोलाको बाढीको उच्च जोखिममा रहेको वार्ड नं. १ निवासी बच्चालाल यादवले जानकारी दिनुभयो । बस्तीमा बाढी पसेर तहसनहस पार्नुको साथै हजारौ विघा खेती योग्य जग्गा, धानबाली कटान हुदै आएकोमा सो तटबन्ध निर्माण भएकोले अब सुरक्षित महसुश भएको उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित बलान नदि प्रणाली आयोजनामा जल उप्तपन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ६ जनकपुरले सप्तरीको हर्दिया गाविसदेखि भारतीय सीमासँग जोडिएको बेल्ही गाविससम्म कुल सात करोड ८५ लाख नौ हजार २१७ रुपियाँको लागतमा बाँध र स्टड निर्माण गरिएको ईन्जिनियर पुरुषोतम साहले जानकारी दिनुभयो । बेल्ही गाविसको भारतीय बोडरसम्म तटबन्ध र स्टड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोले चालु आ.व.देखि नै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।
जसमा गएको आर्थिक वर्षमा हर्दिया गाविस अन्तर्गत साढे १ किलो मिटर तटबन्ध, २ वटा स्टड, र ४४ सेट आरसीसी परकुपाइन निर्माण कार्य सम्पन्नमा रु. एक करोड ८२ लाख २५ हजार १६२ खर्च भएको जानकारी दिदै उहाँले पटेर्वा गाविसमा दुई वटा जियो ब्याग स्टड निर्माणमा रु. ४५ लाख ५३ हजार ७६४, खर्च भएको बताउनुभयो । यस्तै मल्हनियामा ७०० मिटर तटबन्धमा रु. ४० लाख ९२ हजार ७९०, मल्हनियामा १ किलो २५० मिटर तटबन्ध, एउटा एफस, २ वटा जियो ब्याग स्टड निर्माणमा रु. एक करोड ५५ लाख २५ हजार ८२९ र मौआहामा ७०० मिटर तटबन्धमा रु. ४० लाख ९२ हजार २९० खर्च भएको ईन्जिनियर साहले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बेल्ही गाविसमा १ किलो मिटर तटबन्ध, स्टड ९ वटा, आरसीसी परकुपाइन ३४४ सेट, जियो ब्याग स्टड २ वटा गरी रु. दुई करोड ८४ लाख ६१ हजार ६७२ खर्च भएको भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत २०७२ असारमा माँ जानकी निर्माण सेवा दुबरकोट हथलेटवा, रामजानकी निर्माण सेवा जनकपुर, कन्काई÷रामजानकी जे.भी. जनकपुर, सुख शान्ति निर्माण सेवा बडहरमाला, पि.एन. कन्सट्रक्शन असनपुर गोलबजारले निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेको जानकारी दिदै अर्का ईन्जिनियर विश्वनाथ यादवले बन्द हडताल तथा मधेश आन्दोलन तथा त्यसताका डिजेल अभावले निर्माण सामग्री आयत गर्न नसक्दा काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । बन्द हडतालपछि ठेकेदार कम्पनीहरुले काम थालिएपनि पूर्णता हुने काटछाट देखेर कम्पनीहरु बीचमै काम छोडेको कारण धेरै काम उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गराएको उहाँले बताउनुभयो ।